saaray Archives - Axadle
Wasiirka Amniga Galmudug oo amarro soo saaray
Axmed Macalin Fiqi wasiirka amniga galmudug oo ka hadlay qorshaha amniga gobolka mudug ayaa soo saaray amaro cusub oo ku aadan qorshaha xasilinta gobolka. Wasiir Fiqi ayaa sheegay in qofkasta oo al-Shabaab u aaday magaalada Gaalkacyo laga doonayo inuu isdiiwaangaliyo 7 maalmood oo ka bilaabaneysa 27 December, 2020 si hay’adaha amaanka ay u helaan xogtooda. “Dadka ka tagay gobolka Mudug ee ku biiray Al-Shabaab waxay isdiiwaangelinayeen muddo toddobaad ah oo ay u hoggaansamayeen…
Shirka looga hadlaayo ka bixista kumeelgaar
Caasimada Puntland ee Garowe DG waxaa lafilayaa berri oo Talaado ah 29ka Diseembar 2020 in la furo furitaanka sida looga heli karo Kumeelgaarka ku-meelgaarka ah ee 2025. Shirka waxaa ka qeyb galaya Guddoomiyeyaasha labada Aqal ee BFS, Musharaxiinta, Hogaamiyayaasha Dowlad Goboleedyada, Wakiilo kala duwan, Ururada Bulshada Rayidka & shaqsiyaad khibrad u leh xaalada dalka. Fiidnimadii hore ayaa la qabtay dhowr xubnood ayaa darajo lagu martiqaaday oo lagu casuumay inay ka qaybgalaan kulanka sanadlaha ah ee machadka…
FESOJ oo codsatay in shuruud la’aan lagu sii daayo
Xiriirka Suxufiyiinta Soomaaliyeed (FESOJ) wuxuu si kulul u cambaareynayaa xariga wariye Cabdulqaadir Faarax Dulyar oo xalay lagu xiray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. FESOJ waxay sheegtay inay ka xun tahay hab dhaqanka ciidamada amaanka, iyagoo ku eedeeyay in weriyaha ay xalay saqdii dhexe ugu dhaceen hoteel uu ka deganaa magaalada Beledweyne. “Xiriirka Suxufiyiinta Soomaaliyeed (FESOJ) wuxuu si adag u cambaareynayaa xariga sharci darada ah ee Maamulka HirShabeelle, gaar ahaan Hogaamiye ku xigeenka…
Sheffield United have been rescued from the Premier League
AFAR Arrimood Oo Sameeyey Thomas Tuchel Oo Sabab U…
Kevin De Bruyne’s injury is bad…